Natiijooyinka Ganacsiga - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Nagu saabsan|Natiijooyinka Ganacsiga
La Xisaabtanka iyo Waxqabadka
Ganacsiga wuxuu adeegsadaa nidaam maarayn natiijooyin ku saleysan oo la yiraahdo Natiijooyinka Ganacsiga. Natiijooyinka Ganacsigu wuxuu diiradda saarayaa waxyaabaha muhiimka u ah waxa macaamiisheena iyo bulshadeenu ku qiimeeyaan. Natiijooyinka Ganacsiga ayaa la jaanqaadaya Natiijooyinka habka ay Washington u waddo xogta ee hagaajinta joogtada ah iyo ku guuleysiga natiijooyinka. Natiijooyinka Ganacsigu wuxuu si isdaba joog ah u ballaariyaa una horumariyaa si loo hubiyo inaan u gaarsiino ujeedkeenna ugu muhiimsan ee xoojinta bulshada iyadoo:
• Bixinta qaab isdaba-joog ah oo dhameystiran oo lagu maareeyo waxqabadka.
• Ujeedo keenida ujeedkeena xoojinta bulshada iyo ahmiyadaheena.
• Ku wadista waxqabadka wanaagsan iyo natiijooyinka cabirka.
Yoolalka habka natiijooyinka ku saleysan ee xoojinta bulshada waxaa ka mid ah:
• In diiradda la saaro waxa ay bulshada u baahan tahay.
• Horumarinta adeegga bulshada iyadoo laga faa'iideysanayo barnaamijyadayada kaladuwan.
• Taageerida qiyamkeenna hal-abuurnimada, iskaashiga iyo kalsoonida, dhiirigelinta hal-abuurka iyo iskaashiga
guud ahaan wakaalada.
• Qiyaasta waxqabadka go'aammada xogta lagu wargaliyay.
Isku xidhka shaqada dhammaan shaqaalaha Ganacsi iyo Natiijooyinka Washington iyo yoolalka iyo natiijooyinka hay'adda.
Natiijooyinka Ganacsi ee natiijooyinku waxay dhammaystirayaan ujeeddada muhiimka ah ee Ganacsiga si loo xoojiyo bulshada. Ganacsigu wuxuu taabtaa dhinac kasta oo bulshada ka mid ah iyo horumarka dhaqaalaha: qorsheynta, kaabayaasha dhaqaalaha, tamarta, tas-hiilaadka dadweynaha, guryaha, amniga guud, dhibbanayaasha dambiyada, ganacsiga caalamiga ah, iyo adeegyada ganacsiga. Waxaan la shaqeyneynaa dowladaha hoose, ganacsiyada iyo hoggaamiyeyaasha bulshada rayidka ah ee gobolka oo dhan si loo xoojiyo bulshooyinka si dhammaan dadka deegaanku ay u barwaaqoobaan una horumar gaaraan Habka maamulkani wuxuu jiheeyaa jihada cad iyada oo loo marayo yoolalka iyo natiijooyinka, xulashada istiraatiijiyadeed ee mudnaanta, iyo hagaajinta waxqabadka joogtada ah, taas oo ka dhigaysa mid lagama maarmaan u ah cabirka horumarka iyo sameynta go'aannada ku saleysan xogta.
Natiijooyinka Washington waa gudoomiye Inslee maareynta waxqabadka xogta ku saleysan iyo nidaamka hagaajinta joogtada ah.
Natiijooyinka Ganacsiga iyo Natiijooyinka Washington waxay isku daraan dhinacyada ugu wanaagsan ee maaraynta waxqabadka hore iyo dadaallada miisaaniyadda waxqabadka sida GMAP (La xisaabtanka Maareynta Dowladda iyo Waxqabadka) iyo POG (Mudnaanta Dowladda) oo si ballaaran loo ballaariyay hindisaha Lean oo ay ku lug yeelan doonaan dhammaan hay'adaha gobolka.
Cusboonaysiinta Waxqabadka: Janaayo - Maarso 2019
Cusboonaysiinta Waxqabadka: Oktoobar - Diseembar 2018
Cusboonaysiinta Waxqabadka: Julaay - Sebtember 2018
Cusboonaysiinta Waxqabadka: Abriil - Juun 2018
Cusboonaysiinta Waxqabadka: Janaayo - Maarso 2018
Cusboonaysiinta Waxqabadka: Oktoobar - Diseembar 2017
Cusboonaysiinta Waxqabadka: Julaay - Sebtember 2017
Cusboonaysiinta Waxqabadka: Abriil - Juun 2017
Cusboonaysiinta Waxqabadka: Janaayo - Maarso 2017
Natiijooyinka Khariidadda aasaasiga ah ee Ganacsiga
Maamulaha, Kooxda Waxqabadka Abaabulka
Qiyaasta Waxqabadka iyo La Taliyaha Liibaan